Tottenham oo 2017-18 ku dheeli doonta garoonka Wembley - BBC News Somali
Tottenham oo 2017-18 ku dheeli doonta garoonka Wembley
Image caption Garoonka xulka kubadda cagta Ingiriiska ee Wembley
Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, ayaa xaqiijisay in xagaaga soo socda ee 2017-18 ay kulamadeeda martida loo yahay ku dheeli doonto garoonka xulka qaranka Ingiriiska ee Wembley, inta laga dhamaynayo dhismaha ku socda garoonkeeda cusub.
Garoonka cusub ee kooxda oo ka kooban 61,000 oo kursi ayaa waxaa laga ag dhisayaa garoonkeeda ay haatan ku dheesho ee White Hart Lane.
Kooxda Spurs, ayaa kulamadeedii Koobka Horyaalada Yurub iyo midka Europa League-ga waxa ay xagaagan ku dheeshay garoonka Wembley hasayeeshee afar kulan oo ay garoonkan ku ciyaartay ayaa waxa ay badisay hal kulan oo qura.
"Kani waa waqti aad muhiim ugu ah taariikhda kooxda," waxaa sidaasi bayaan ku sheegay gudoomiyaha kooxda Daniel Levy.
"Wembley waxaannu ku dheeli doonnaa hal xilli ciyaareed kaddibna waxaannu ku laaban doonnaa garoon noqon doona mid ka mid ah garoomada ugu wanaagsan caalamka, sidoo kalana lagu dheeli karo ciyaaraha NFL ee Mareykanka, garoonkanna waxa uu muhiim u noqon doonaa kobaceenna iyo horumarkeenna mustaqbalka." Ayuu yiri Daniel Levy.
Garoonka cusub ayaa waxaa la filayaa inuu ku kici doono £750 milyan hasayeeshee marka la dhameeyo waxa uu aagaasi ka abuuri doonaa ku dhawaad 3,500 oo shaqo, sida ay kooxdu sheegtay.
Spurs, oo afar dhibcood ka hoosaysa kooxda hogaaminaysa Horyaalka Ingiriiska ee Chelsea, ayaa xagaagan waxaa uga harsan shan kulan, iyadoo ciyaarta ugu dambeysa ee ay ku dheelayso garoonkeeda White Hart Lane-na ay 14 bisha May la yeelan doonto kooxda Manchester United.
Ciyaartii dhaweyd ee ugu dambaysay ee ay ku dheesho garoonka Wembley ayaa todobkii tegay waxaa nus dhammaadka koobka FA-ga kaga adkaatay 4-2 kooxda Chelsea.